» “यात्रु अलपत्र, जहाज, रित्तै उड्दै” “यात्रु अलपत्र, जहाज, रित्तै उड्दै” – हाम्रो खबर
“यात्रु अलपत्र, जहाज, रित्तै उड्दै”
2021, October 27th, Wednesday
हाम्रो खबर संबाद दाता 187 Views
“आइतबारबाट धनगढी–बझाङ उद्धार उडान थालेको निगमको जहाजमा टिकट वितरणमा मनपरी हुँदा विपद्‍मा परेका यात्रुलाई सास्ती”
“स्थानीयले धनगढी–बझाङ नियमित उडान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला यात्रु नपाइएको भन्दै खाली जहाज उडाउन थालिएको छ । आइतबारदेखि धनगढी–बझाङमा उद्धार उडान थालेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले यात्रु नै नल्याएर खाली जहाज उडाउन थालेको हो ।”
“टिकटको खोजीमा रहेका यात्रुले निगम कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताएका छन् भने निगमले धनगढीमा यात्रु अभाव भएको दाबी गर्दै उडान नियमित नहुने जनाएको छ ।”
“धनगढीको एक रेडियोलाई सोमबार अन्तवार्ता दिँदै निगमका नायव महाप्रबन्धक गणेश चन्दले भने, ‘धनगढीबाट बझाङ जाने यात्रु दुई जना मात्रै भए भन्ने रिपोर्ट आएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उडाउन सकिन्छ ?’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि उनले धनगढीमा यात्रु अभाव रहेको जानकारी आएको बताए । यद्यपि सयौं यात्रुले धनगढीबाट बझाङ आउन चाहेको बताइरहेका छन् ।”
“हामीले दुई दिनदेखि टिकट काट्न निगमका कर्मचारी खोज्यौं तर नभेटेपछि भनसुन गरेर बुधबारका लागि निजी एयरलाइन्सको टिकट लिएका छौं,’ भारतबाट १२ जनाको समूहमा आएका मस्टा गाउँपालिकाका कलक बोहराले भने, ‘अहिले निगमको जहाज ९ जना मात्रै यात्रु लिएर गयो भन्ने खबर सुनियो । यहाँ मान्छे भने टिकट नपाएर भौंतारिएका छन् ।’ उनले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका धनगढीबाट बझाङ आउन चाहने ७० जनाभन्दा बढीले टिकट नपाएको बताए ।”
“नायब महाप्रबन्धक चन्दले गिरी थरका एक कर्मचारीलाई धनगढीमा टिकट व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्जबाट खटाइएको बताएका छन् । बझाङका स्थानीयले भने धनगढीमा यात्रुको चाप हुँदाहुँदै जहाज खाली उडाएर नियमित उडान रोक्ने निगमका कर्मचारीको चालबाजी भएको आरोप लगाएका छन् । ‘मेरा १५/२० जना आफन्त धनगढीबाट बझाङ आउने टिकट नपाएर एक सातादेखि होटलमा छन्,’ सुर्मा गाउँपालिकाका दीपक बोहराले भने, ‘यहाँ खाली जहाज आयो भन्दा अचम्म लागेको छ ।”
“निगमको उद्धार उडानको आसमा रहेका सयौं यात्रु निराश बनेका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका–९ की ६७ वर्षीया रमा खड्का त एक सातादेखि जहाजको टिकट खोज्न भौंतारिएकी छन् । बझाङमा नियमित उडान गरिरहेको एक मात्रै निजी विमान कम्पनी समिट एयरको टिकटका लागि धाएकी उनी टिकट पाउन नसकेपछि निराश थिइन् । निगमको जहाजको समेत टिकट नपाएपछि उनी अलपत्र परेकी छन् । निगमले उद्धार उडान गर्ने जानकारी पाएपछि दसैं बिदामा घर आएका नाति–नातिनालाई धनगढी पठाउन उनी सोमबार सदरमुकाम चैनपुर पुगेर टिकटको लाइनमा बसिन् । बिहान १० बजे पुगेकी उनलाई मंगलबारको उडानको टिकट सकिएकाले अर्को दिन आउन भनियो ।”
“मंगलबार बिहान ८ बजे खाना नखाई उनी लाइन बस्न पुगिन् । तर दिउँसो ४ बजेसम्म पनि टिकट काट्ने कर्मचारी आइपुगेनन् । यतिन्जेल लाइनमा बस्नेको संख्या ७६ पुगिसकेको थियो । दिउँसो ३ बजे जो पहिला आयो उसैले मात्रै टिकट पाउने उर्दी जारी गरेका निगमका कर्मचारी ४ बजेसम्म पनि सम्पर्कमा आएनन् । फोनसमेत अफ भएपछि यात्रु आक्रोशित भए । ‘बिरामी मान्छे सकिनसकी भोकभोकै बिहानदेखि लाइन लागें । टिकट काट्ने मान्छे नै आएन,’ रमाले आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘गाडीबाट पठाऊँ भने गाडी चल्दैन । प्लेनको टिकटको हालत यस्तो छ ।”
“साँझसम्म पनि कर्मचारी सम्पर्कमा नआएपछि लाइन बसेकाहरू नाराजुलुस गर्दै जिल्ला प्रशासनमा पुगे । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेका उनीहरूले सन्तोषजनक जवाफ पाएनन् । ‘सहायक सीडीओले पनि भोलि–पर्सि निगमको कर्मचारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्छु भने । पावर हुने मान्छेलाई मात्रै उडाइरहेका छन् । सर्वसाधारणले टिकटै पाएनन्,’ बिहान ८ बजेदेखि नै लाइन बसेका तेज कठायतले भने, ‘अब त सरकारी जहाज आयो सुविधा होला भनेको त सास्ती मात्रै पायौं ।”
“पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको आदेशमा आइतबारबाट उद्धार उडान थालेको निगमको जहाजमा टिकट वितरणमा मनपरी हुँदा विपद्मा परेका यात्रुले सुविधा पाउनुको साटो सास्ती पाउन थालेका छन् । मंगलबार मात्रै कतिपय यात्रु टिकट पाउने हल्ला सुनेर चैनपुरबाट चार किलोमिटर टाढा रहेको देवल विमानस्थलसम्म दौडादौड गरेर पुगेका थिए ।”
“निगमले टिकट व्यवस्थापनका लागि भनेर घर बिदामा आएका कर्मचारी अमृत ओखेडा र प्रमोद च्वानलाई जिम्मेवारी दिइएको बताएको भए पनि अमृत ओखेडाले मंगलबार दिउँसो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफू टिकट व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा नरहेको र प्रमोद च्वानलाई सम्पर्क गर्न भनेका थिए । यद्यपि मंगलबार दिनभरि दुवै जनाको फोन अफ गरिएको थियो ।”
“प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले आइतबार मात्रै निगमका कर्मचारीलाई जहाजको सिट संख्याअनुसारको सबै टिकट पारदर्शी तरिकाले बाँड्न निर्देशन दिए पनि सोमबार ९ सिटको टिकट मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको थियो । ‘दिनभर लाइन लगाएर ९ जनालाई मात्रै टिकट दियो,’ अर्की यात्रु सुशीला थापाले भनिन्, ‘बाँकी सिटमा आफ्नै आसेपासेलाई पठाए । दिनभर लाइन बस्नेहरू चिल्लै भए ।”
“सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजाराम गौतमले पारदर्शी तरिकाले टिकट वितरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउँदै निर्देशन नमाने निगमका कर्मचारीलाई बोलाएर कारबाही गर्ने बताए । ‘विपतद्का बेलामा समस्या परेकाहरूलाई सहज हुने गरी टिकट नदिएर सास्ती कसैले दिन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा जनतालाई दुःख दिने काम भएको रहेछ भने हामी बुझेर कारबाही गर्छौं ।’
“माओवादी,बाट एमाले बनेका, नेताहरू ,पनि चुनावमा, प्रतिस्पर्धा, रोचक बन्दै”
“आजदेखि सम्पूर्ण, कार्यकारी पद,बाट विदा लिएको पण्डितको, घोषणा”
“भीम रावलले “बा” ‘नाइँ मलाई, त्यही केटी चाहिन्छ’ भने,जस्तो गर्नुभयो : महेश बस्नेत”
“ओली र रावलबीच, प्रतिस्पर्धा हुने, यस्तो छ, एमालेको चुनावी, तालिका”
“ओलीका दुई ‘विश्वासपात्र’ नै परेनन् पदाधिकारीमा,दुई जनानै, परे जिल्ल”
“ओलीको सूची,लाई चु’नौती, दिँदै तीन जनाले दिए उम्मेदवारी’
ओलीद्वारा १९ पदाधिकारीको घोषणा : अध्यक्षमा ओ¥ली आफै, महासचिवमा शंकर पोख¥रेल,,,,
“बाहिरबाट दुई हजार मानिस ल्याएर नाच्दैमा चितवनमा प्रचण्डलाई फरक पर्दैन”-रेनु दाहाल
“एमालेको महाधिवेशन ,स्थलमा कहाँबाट, आयो जिवित गैंडा ?सेल्फी खिच्न नेता कार्यकर्ता को घुइँचो”
एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज चुनाव हुने, कसले अध्यक्षमा बाजि मार्ला? रावल? ओली?,,,,
“भीम, रावलले गरे ,अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी, दर्ता” ओलिका कार्यकर्ता देखी समर्थन, लाई धुकधुक”
“एमालेमा नयाँ,नेतृत्व चयनका,लागि आज, चुनाव हुने”
“ओलीको ३०१ केन्द्रीय कमिटीमा परेनन् दुर्गा प्रसाईं,निराश हुदै फन्किएर, बन्दसत्र,बाट बाहिरिए”
ॐ श्री पाथिभरा माताले, सबैको मनोकामना, पुरा गरुन, मंसिर १३ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य, कस्तो छ हेर्नुहोस, राशिफलॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
“ऋषि धमलाकी पत्नी, एलिजाले सामाजिक, संजाल तताउदै, देखिइन् अहिलेसम्मकै ,बोल्ड अवतारमा ,(तस्बिर सहित)
( 2021, November 29th, Monday)